Abashayeli be-Android Buyisela ku-Linux Kernel 3.3 | Kusuka kuLinux
Kusuka H-Online.com Ngithola ngalezi zindaba.
Kwenzeka ukuthi ngenxa UGreg Kroah-Hartman abashayeli be Android ini kanye lapho behoxisiwe we-kernel (Linux v2.6.33) ngonyaka odlule 2010, bazobuyela ku-Linux kernel (v3.3) 🙂
Umqondo ngukuthi kule nguqulo (3.3), sekuvele kungenzeka ukuthi kuqale idivaysi ye-Android ngaphandle kokubeka amabala noma okuthile okunjalo ku-kernel kanjalo. Kodwa-ke, akuyona yonke into ezosuka egatsheni noma endaweni yentuthuko (lapho kukhona abashayeli njengamanje) iye egatsheni elizinzile, angazi ukuthi kungani ... ngicabanga ukuthi kuyinto yesikhashana.
Isibonelo abasitshela sona ukuthi ikhodi ye- I-WakeLock (kwandisa impilo yebhethri) akufakiwe.
Iqembu le-Electronic Consumers (le-Linux Foundation) ngokubambisana nabanye onjiniyela abambalwa, lisebenza ngokubambisana ne UKroah-Hartman kule phrojekthi. UTim Bird, umongameli we-Architecture Group, ubeke ngokuqhubeka el Ukuqhakambisa iphrojekthi ye-Android ngenhloso yokuxhumanisa umsebenzi wokuhlanganisa wezici ze-Android. Onjiniyela abanentshisekelo yokusiza ukuhlanganisa ama-patches we-Android kungqikithi enkulu bangabhalisela i- uhlu lwamakheli wephrojekthi.
Futhi-ke, kunjalo 😀
Android Ngihlale ngikusho, kunamandla amaningi ... ngicabanga ukuthi akukho ukungabaza ngalokho. Ngizokulethela esinye isihloko ku Android kumakhompyutha, linda 🙂
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Abashayeli be-Android babuyela ku-Linux Kernel 3.3
Ngiyalwazi uhlelo lwe-Android, ngisafunda nje, nakuma-PC uzobhekisa ku-Android x86, ngiyaqonda ukuthi yenzelwe amakhompyutha we-Asus Eee, ngiyizamile kwi-netbook yami, i-hp mini, emshinini obonakalayo futhi ayisebenzi inetha elicolekile, kepha kufanelekile ukuzama.
Ngempela, i-ethernet akuyona nje kuphela eletha izinkinga. Njengoba ngishilo, ngiqeda i-athikili ekhuluma nge-Android kwamanye amapulatifomu, sizoyikhipha kungekudala (namuhla kungenzeka) 😀
Ngiyabingelela futhi wamukelekile kusayithi lethu 🙂